Nchegbu site na nkwari akụ gị na Airport Basel - site na 40.- CHF
Anyị na-enye gị ọrụ pụrụ iche dịka onye ọbịa n'ụlọ nkwari akụ na obodo anyị mara mma na Basel. Site na ọrụ niile n'oge ị nọ na Basel, anyị ga-ahụ na i nwere ike ilekwasị anya n'ihe ndị dị mkpa - ma ọ bụ ilegharị anya na Old Town, na nleta na Kunstmuseum ma ọ bụ nzukọ azụmahịa gị.
Nyefee ọrụ ozugbo site na ọdụ ụgbọ elu ma ọ bụ nkwari akụ
Ozugbo ị rutere Basel na ọdụ ụgbọ elu ma ọ bụ n'ọdụ ụgbọ oloko, anyị ga-eburu nrụgide njem gị. Anyị na-echere gị mgbe ị bịarutere ma nyefee gị njem gị site n'inye gị akpa gị Sedan aka. Site n'ebe ahụ anyị na-eduga gị na ụlọ nkwari akụ gị ma ọ bụ ebe omume. Ọkwọ ụgbọala gị ga-enwe obi ụtọ inye aka na akpa gị ruo n'ọnụ ụlọ nkwari akụ.
Enweghị nsogbu site na nkwari akụ gị na Airport Basel
Ozugbo ịchọrọ ịkwụsị ịnọ na Basel na ụgbọala na ọdụ ụgbọ elu, ị nọ n'ọnọdụ kwesịrị ekwesị Basel Biputa OziỊ na-enwekwa àgwà mbụ na ụlọ ọrụ niile dị. O zuola ka anyị gwa gị banyere arịrịọ ị na-ebufe na elekere hour gara aga tupu ị chọpụta na họtel ahụ. Na ị gaghị echegbu onwe gị banyere inweta akwụkwọ ego zuru ezu na ego mba ọzọ, dị ka ọ dị na mbụ, anyị nwere obi ụtọ inye gị ụgwọ ịkwụ ụgwọ kaadị akwụmụgwọ.
Ị nwere ike ịme ndoputa gị online. Anyị na-atụ anya ime ka njem gị bụrụ ihe dị mma ma dị mma.
Onye ọrụ ọrụ gị si Basel
Edere na: Basel ọdụ ụgbọ Shuttle limousine ọrụ
taxi.flughafen March 9, 2017 March 16, 2017 Basel, ọdụ ụgbọ Shuttle, limousine ọrụ Enweghị ihe ọ bụla
← Ụgbọ njem ụgbọ mmiri maka Zurich na Basel
2018 BASELWORLD - Na-agafe na njem na Basel →